Olee Otú Mmadụ Ga-esili Ahụ Chineke?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Myanmar Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Venda Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
“CHINEKE bụ Mmụọ.” Mmadụ enweghị ike ịhụ ya anya. (Jọn 4:24) Ma, ihe Baịbụl kwuru gosiri na e nwere ike ikwu na ụfọdụ ndị ahụtụla Chineke. (Ndị Hibru 11:27) Olee otú mmadụ ga-esi ahụ Chineke anya? Ị̀ ga-ahụli Chineke onye “a na-apụghị ịhụ anya”?—Ndị Kọlọsi 1:15.
Weregodị ọnọdụ anyị tụnyere nke onye kpụrụ ìsì kemgbe a mụrụ ya. Ìsì ahụ o kpuru ọ̀ na-eme ka ọ ghara inwe ihe na-emenụ ọ na-aghọta? Mba. E nwere ọtụtụ ụzọ onye ìsì si amata ndị mmadụ na ihe dị iche iche ọ na-anaghị ahụ, na ihe ndị na-emenụ n’ebe ọ nọ. Otu onye ìsì kwuru, sị: “Ihe mmadụ ji ahụ ụzọ abụghị anya. Ọ bụ obi.”
Otú ahụ ka ọ dịkwa anyị. Ọ bụ eziokwu na anyị agaghị ejili anya nkịtị hụ Chineke, ma anyị nwere ike iji “anya nke obi” anyị hụ ya. (Ndị Efesọs 1:18) E nwere ụzọ atọ i nwere ike isi hụ Chineke. Ka anyị leba ha anya.
‘A NA-AHỤ YA NKE ỌMA MALITE MGBE E KERE ỤWA’
Ntị onye ìsì na-anụ ihe nke ọma karịa nke onye na-ahụ ụzọ, ọ na-abụkwa ya metụ ihe aka, ụbụrụ ya agwa ya ihe ihe ahụ bụ ngwa ngwa. Ọ bụ ihe ọ nụrụ na ihe o bitụrụ aka ka o ji aghọta ihe ndị ọ na-enweghị ike ịhụ anya. Anya gị, ntị gị, imi gị, na aka gị nwekwara ike inyere gị aka ka i nyochaa ihe ndị dị n’ụwa ma ghọta onye Chineke bụ n’agbanyeghị na anyị enweghị ike ịhụ ya anya. Baịbụl kwuru na “àgwà ya ndị a na-apụghị ịhụ anya ka a na-ahụ nke ọma malite mgbe e kere ụwa gaa n’ihu, n’ihi na a na-aghọta ha site n’ihe ndị e kere eke.”—Ndị Rom 1:20.
Dị ka ihe atụ, chebagodịrị ụwa anyị a echiche. Otú Chineke si kee ụwa anyị a gosiri na ọ bụghị naanị ka anyị dịrị ndụ na ya mere o ji kee ya, ọ chọkwara ka ndụ na-atọ anyị ụtọ. Ọ na-abụ ezigbo ikuku kusa anyị n’ahụ́, obi na-atọ anyị ụtọ. Anwụ ụtụtụ chasa anyị, ahụ́ na-ekporo anyị ọkụ. Ọ na-abụkwa anyị taa mkpụrụ osisi dị ụtọ ma ọ bụ nụ ubé nnụnụ, obi adị anyị mma. Ọ̀ bụ na ihe ọma ndị a Chineke na-emere anyị egosighị na ọ na-echebara anyị echiche, na-emesapụ aka, ma dị ọmịiko?
Gịnị ka ihe ndị anyị na-ahụ ná mbara ígwé na-akụziri anyị banyere Chineke? Otu ihe ihe ndị dị n’eluigwe na-akụziri anyị bụ na Chineke dị ike. Ihe ndị sayensị chọpụtara ná nso nso a gosiri na ụwa na ihe ndị dị na mbara ígwé na-asakwu mbara n’ike n’ike. I lee anya n’eluigwe n’abalị, jụọ onwe gị, sị: Ike ahụ mere ka ụwa na ihe ndị dị na mbara ígwé na-asakwu mbara n’ike n’ike si ebee? Baịbụl gwara anyị na ike Onye kere ihe ndị a “dị ukwuu.” (Aịzaya 40:26) Ihe ndị Chineke kere na-egosi na ọ bụ “Onye Pụrụ Ime Ihe Niile,” onye “ike ya dị ukwuu.”—Job 37:23.
‘ONYE KỌWAARA ANYỊ ONYE CHINEKE BỤ’
E nwere otu nwaanyị mụrụ ụmụ abụọ kpuru ìsì. Nwaanyị ahụ sịrị: “Ụmụ m na-esikarị n’ihe m gwara ha amụta ihe. M gwa ha ihe m na-anụ na ihe m na-ahụ, ha ejiri ajụjụ so m ruo mgbe m kọwaara ha ihe niile. Ọ bụ m bụ anya ha.” Otú ahụ ka ọ dịkwa anyị. N’agbanyeghị na “ọ dịghị mmadụ hụtụrụla Chineke mgbe ọ bụla,” Ọkpara Chineke, bụ́ Jizọs, onye nọ n’akụkụ Chineke, kọwaara anyị onye Chineke bụ. (Jọn 1:18) Ebe Jizọs bụ onye mbụ Chineke kere, bụrụkwa onye Chineke mụrụ naanị ya, ọ ghọọrọ anyị anya anyị ji ahụ ihe ndị dị n’eluigwe. Ọ bụ ya ga-agwa anyị nke bụ́ eziokwu banyere Chineke, bụ́ onye anyị na-enweghị ike ịhụ anya.
Jizọs na Nna ya nọrọ ọtụtụ afọ a na-enweghị ike ịgụta ọnụ. Lee ihe ụfọdụ o kwuru banyere Chineke:
Chineke na-arụ ọrụ mgbe niile. “Nna m anọwo na-arụ ọrụ ruo ugbu a.”—Jọn 5:17.
Chineke maara mkpa anyị. “Nna unu maara ihe ndị na-akpa unu tupu unu arịọ ya.”—Matiu 6:8.
Chineke na-enye anyị ihe ndị dị anyị mkpa. ‘Nna unu nọ n’eluigwe na-eme ka anyanwụ ya waara ndị ọjọọ na ndị ọma, na-emekwa ka mmiri zooro ndị ezi omume na ndị ajọ omume.’—Matiu 5:45.
Chineke ji onye ọ bụla n’ime anyị kpọrọ ihe. “Ọ̀ bụ na a dịghị ere nza abụọ otu mkpụrụ ego nke ga-azụtali naanị ihe dị nta? Ma o nweghị otu n’ime ha ga-ada n’ala, Nna unu aghara ịma. Ma a gụwo ntutu niile dị n’isi unu ọnụ. Ya mere, unu atụla egwu: Unu dị oké ọnụ ahịa karịa ọtụtụ nza.”—Matiu 10:29-31.
ONYE MERE KA A MATA CHINEKE A NA-ENWEGHỊ IKE ỊHỤ ANYA
Otú ndị kpuru ìsì na-esikarị aghọta ihe na-adị iche n’otú ndị na-ahụ ụzọ si aghọta ihe. Onye kpuru ìsì nwere ike iwere ebe gbara ọchịchịrị ka ebe juru oyi anwụ na-anaghị acha kama iwere ya ka ebe gbara itiri. Otú ahụ onye na-anaghị ahụ ụzọ chaa chaa na-agaghị ama ihe bụ́ ìhè na ọchịchịrị, ọ bụ otú ahụ ka anyị na-enweghị ike ịghọta onye Jehova bụ ma ọ bụrụ na e nyereghị anyị aka. Ọ bụ ya mere Jehova ji zitere anyị onye na-akpa àgwà ka ya.
Onye ahụ Jehova zitere bụ Jizọs. (Ndị Filipaị 2:7) Ihe Jizọs mere abụghị naanị ịgwa anyị banyere Nna ya, o gosikwara anyị ụdị onye Chineke bụ. E nwere mgbe onye na-eso ụzọ Jizọs aha ya bụ Filip gwara Jizọs, sị: “Onyenwe anyị, gosi anyị Nna ahụ.” Ma, Jizọs sịrị ya: “Onye hụrụ m ahụwokwa Nna m.” (Jọn 14:8, 9) Olee àgwà ndị Jizọs kpara bụ́ ndị mere ka anyị ‘hụ’ ma ọ bụ ghọta ụdị onye Nna ya bụ?
Jizọs dị umeala n’obi, ọ na-emesapụkwara ndị mmadụ ihu. (Matiu 11:28-30) Àgwà ọma ya mere ka ndị mmadụ na-akpa ya nso. Ọ na-ewute Jizọs ma ọ hụ ka ndị mmadụ nọ ná mwute. Ọ na-esokwa ndị na-aṅụrị ọṅụ aṅụrị ọṅụ. (Luk 10:17, 21; Jọn 11:32-35) Mgbe ọ bụla ị na-agụ ebe kọrọ gbasara Jizọs na Baịbụl ma ọ bụ na-egere ya egere, mee ka obi gị dịrị na ya, gbalịakwa ka ọ dị gị ka ị̀ na-ahụ ka ihe ahụ na-eme. Ọ bụrụ na i chebara otú Jizọs si mesoo ndị mmadụ ihe echiche, ị ga-aghọtakwu àgwà ndị magburu onwe ha Chineke nwere, àgwà ndị ahụ ga-emekwa ka ị hụ Chineke n’anya.
IHE NDỊ Ị GA-EME KA Ị GHỌTA ONYE CHINEKE BỤ NKE ỌMA
Otu onye na-ede akwụkwọ kwuru otú ndị ìsì si aghọta ihe ndị na-eme n’ụwa. Ọ sịrị: “Ndị ìsì na-aghọta ihe obere obere. Ha na-esi ụzọ dị iche iche aghọta ya (aka ha metụrụ n’ihe, ísì ha nụrụ, olu ma ọ bụ ụda ha nụrụ, na ụzọ ndị ọzọ). Ha jikọta ihe niile a, ha aghọta ihe na-emenụ.” Otú ahụ ka i kwesịkwara ime. Ọ bụrụ na i kirie ihe ndị Chineke kere, gụọ ihe Jizọs kwuru banyere Nna ya ma chee echiche banyere otú àgwà Jizọs kpara si gosi ụdị onye Chineke bụ, ị ga-aghọtazi onye Jehova bụ nke ọma. Jehova ga-adịkwa gị ka onye ị na-ahụ anya.
Ọ bụ otú ahụ ka ọ dị nwoke dịrị ndụ n’oge ochie aha ya bụ Job. Ná mmalite, ‘o kwuru ihe ọ na-aghọtaghị.’ (Job 42:3) Ma mgbe o chebachaara ihe ndị dị ịtụnanya Chineke kere echiche, o kwuru, sị: “Ọ bụ n’akụkọ ka m nụrụ banyere gị, ma ugbu a, anya m na-ahụ gị.”—Job 42:5.
‘Ọ bụrụ na ị chọọ Jehova, ọ ga-ekwe ka ị chọta ya’
Anya gị nwekwara ike ịhụ Chineke. “Ọ bụrụ na ị chọọ [Jehova], ọ ga-ekwe ka ị chọta ya.” (1 Ihe E Mere 28:9) Obi ga-adị Ndịàmà Jehova ụtọ inyere gị aka ka ị chọọ Chineke ma chọta ya n’agbanyeghị na mmadụ enweghị ike iji anya nkịtị hụ ya.